मार्सी चामलले जित्यो, डा. केसीका माग पुरा भएनन Darpansansar News
काठमाडौं । नेकपा निकट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको घरमा मार्सि चामलको भात खाएका नेकपा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गुन तिरेका छन। प्रसाईंको लगानी रहेको झापास्थित बीएण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधवार पारित गरिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकिकरण अन्तिम चरणमा व्यवसायी प्रसाईंको घरमा भक्तपुरस्थित घरमा बसेर दुवै जनाले मार्सि चामलको भात खाएका थिए ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सत्तापक्षीय संसदहरुको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। बैठकमा समिति सदस्य एवं काँगे्रेस सांसद गगनकुमार थापाले असहमति हुँदाहुँदै विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्य भएको बताए।
विधेयक संसदबाट अनुमोदन भएमा झापास्थित बी एण्डसी मेडिकल कलेज संचालनको बाटो खुल्ने छ। झापास्थित बी एण्डसी र काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले आशय पत्र लिइसकेका छन।
समितिबाट पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा ६ मा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र आशय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यो प्रावधान सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता विपरित छ। यस अघि सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संंस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान थप्ने सम्झौता गरेको थियो।
सत्तापक्षिय व्यवसायिहरुको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई पनि स्थान्तरण गरेर खोल्ने बाटो खुलेको छ। आशय पत्र पाएको र पुर्वाधार पुरा गरेको यस कलेजले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। आशयपत्र पाई पूर्वाधार पुरा गरेको मनमोहन कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डा. केसीले सम्झौता विपरित विधेयक पारित भएकोमा विरोध जनाउँदै अनशन शुरु गरेका छ। बुधवार बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्य थापाले सहमति नहुनुलाई दुर्भाग्य भन्दै सरकारले धोका दिएको बताए। तर समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले संसदको सर्वोच्चता र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु पर्ने बताए।
समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद रेखा कुमारीले बैठकका बेला कुन सांसदले व्यक्ति गरेका अभिव्यक्तिले कसलाई बोकेको हो भन्ने प्रष्ट भएको खुलाइन। उनले भनिन, ‘ आसयपत्र पाएका मेडिकल कलेजको हकमा प्रोत्साहन सहित उपत्यका बाहिर लैजान पाउनु पर्छ। लाखौं ÷करोडौं खर्च गरेकालाई कसरी धरापमा पार्ने ?’ डा. केसीसँगको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा विपक्षि काँग्रेसका सांसदहरु थिए। सत्तापक्षीय सांसदहरु भने आशय पत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई एकपटक मौका दिनु पर्ने पक्षमा देखिएका थिए।
सरकारले डा.केसीसँग गरेको सम्झौतालाई विधेयकमा नसमेटिएको सम्बन्धमा नेकपाकी सांसद रेखा कुमारीले संविधानको मर्म अनुसार विधेयक तयार भएको बताइन। ‘ सरकारी जागीर खाने अनि राजनीति गर्न खोज्ने ? केसीले भने अनुसार समिति र सदन चल्ने हो र ? ’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन।-अन्नपुर्ण पोष्टबाट l